नेपालले युएईलाई हराउन सुधार गर्नुपर्ने पाँच कमजोरी | Hamro Khelkud
नेपालले युएईलाई हराउन सुधार गर्नुपर्ने पाँच कमजोरी
काठमाडौं(हाम्रो खेलकुद) – नेपालले एसिसी महिला टि२० च्याम्पियनसिपमा शुक्रबार पहिलो सेमिफाइनलमा युएईसँग खेल्दैछ । नेपालले युएईलाई हराउन सके एसिया कपको लागि छनोट हुनेछ । एसिया कपमा भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका र थाईल्यान्ड छन् ।
नेपाल समूह बी को उपविजेता र युएई समूह ए को विजेताको रुपमा सेमिफाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका हुन् । नेपाल हङकङसँग ७ विकेटले पराजित हुँदा युएई अपराजि टोली हो । पछिल्लो समय युएई महिला टोलीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएको छ ।
गत वर्ष नोभेम्बरमा आइसिसी टि२० विश्वकप एसिया क्षेत्र छनोटमा युएईले नेपाललाई ४८ रनले पराजित गरेको थियो ।
नेपालले आफ्नो केहि कमजोरीलाई सुधार नगरी युएईलाई हराउन कठिन देखिन्छ । युएईलाई हराउँदै एसिया कप खेल्ने सपना पूरा गर्न नेपालले सुधार गर्नुपर्ने पाँच कमजोरी यस प्रकार छन् ।
नेपालले राम्रो ब्याटिङ गर्दै युएईलाई हराउन नेपालको ब्याटिङक्रम नै परिवर्तनको आवश्यक देखिन्छ । शीर्ष चार ब्याटिङक्रम निकै महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । नेपालले भुटानविरुद्ध विन्दु रावल र ज्योति पाण्डेलाई ओपनिङ गराएको थियो । सीता रानामगर तेस्रो, इन्दु बर्मा चौथो, काजोल श्रेष्ठ पाँचौं र रुविना क्षेत्रीलाई पाँचौं नम्बरमा ब्याटिङ गरेका थिए ।
कुवेतविरुद्ध ज्योति र विन्दुले ओपनिङ सीता तेस्रो, इन्दु चौथो, काजोल पाँचौं र रुविना छैटौं नम्बरमा ब्याटिङ गरेका थिए । हङकङविरुद्ध सीता र विन्दु ओपनिङ, इन्दु तेस्रो, काजोल चौथो र रुविनाले पाँचौं नम्बरमा ब्याटिङ गरेका थिए । यो ब्याटिङक्रमले युएईलाई हराउन कठिन पर्छ ।
विन्दु र ज्योति दुबै सुस्त शैलीमा खेल्ने गर्दछन् । प्लेइङ ११ मा नेपालले विन्दु, काजोल, ज्योति, सीता र अप्सरी गरि पाँच ओपनर खेलाएको छ । नेपालले ओपनरमा सीता र अप्सरी राम्रो विकल्प देखिन्छन् । सीताले इनिङ सम्हाल्दा अप्सरीले आक्रामक ब्याटिङका साथ रनको गति बढाउन सक्छिन् । महत्वपूर्ण र दबाबको खेलमा अनुभवी खेलाडीको प्रदर्शन महत्वपूर्ण हुन्छ ।
तेस्रो नम्बरमा इन्दु बर्मालाई खेलाउन सक्छ ।
चौथो नम्बरमा कप्तान रुविना आफैं आउनुपर्छ । किनभने प्रमुख खेलाडीको प्रदर्शन निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । छैटौं नम्बरमा खेल्दा तुलनात्मक रुपमा कम बल खेल्न पाइन्छ । चाँडै पालो आउन टोलीले खराब सुरुवात गर्नुपर्छ । खराब सुरुवातमा ठूलो इनिङ खेल्न कठिन पर्छ । रुविनाले चौथो नम्बरमा ब्याटिङ गर्दै राम्रो योगफलमा पुर्याउन सक्नुपर्छ ।
रुविनाले तल्लोक्रमका ब्याटरलाई खुलेर खेल्न सक्ने वातावरण तयार पार्दिनुपर्छ । पाँचौं नम्बरमा विकेटकिपर ज्योति र काजोल मध्य एकलाई मैदान उतार्नसक्छ । राम्रो अवस्थामा फिनिसरलाई प्रयोग गर्नसक्छ । छैटौं र सातौं नम्बरमा दुई फिनिसर डली भट्ट र कविता जोशी राम्रो विकल्प हुन् । यी दुई हिटरले जिम्मेवारीका साथ उत्कृष्ट अन्त्य गर्नसके राम्रो योगफलमा पुग्नसक्छ ।
आठौं नम्बरमा कविता कुँवर र नवौं नम्बरमा अश्मिना कर्माचार्यले ब्याटिङ गर्नसक्छन् । कविता राम्रो ब्याटिङ गर्नसक्छिन् । दशौं र ११ औं नम्बरमा स्पिनर संगिता राई र सबनम राई हुनसक्छन् । त्यसैले युएईलाई हराउन नेपालले ब्याटिङक्रम र प्लेइङ ११ दुबै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा जित कठिन पर्नसक्छ ।
४. बलिङमा उत्कृष्ट सुरुवात
यस प्रतियोगितामा युएईका शीर्ष तीन ब्याटरले पूरै प्रतियोगिता खेलेका छन् । युएईको मध्यक्रम र तल्लोक्रमका ब्याटरले एक बल पनि खेल्न पाएका छैनन् ।
त्यसैले शीर्ष तीन ब्याटरलाई सुरुवातमै आउट गर्न सके नेपाल पूरा खेलमा हाबी हुनसक्छ । युएईकी ओपनर ईशा रोहित ओजाले तीन इनिङमा एक शतकसहित कुल १ सय ७० रन, तीर्थ सतिशले दुई अर्धशतक सहित १ सय १० र कविशा ईगोडागेले ७३ रन बनाएकी छिन् । युएईको कमजोरीनै मध्यक्रम र तल्लोक्रमका ब्याटर हो ।
जसको नेपाली बलरले सुरुवातमा फाइदा लिन सक्नुपर्छ । शीर्षक्रमका ब्याटरलाई चाँडै आउट गर्दा युएई सस्तैमा अल आउट हुने सम्भावना उच्च देखिन्छ ।
३. ठूलो इनिङको आवश्यक
विशाल योगफल बनाउन वा पूरा गर्न कम्तिमा एक ब्याटरले ठूलो इनिङ खेल्नुपर्छ । तर यस प्रतियोगितामा नेपाली ब्याटरको उच्च प्रदर्शन ३४ रन छ । जुन रुविना क्षेत्रीले कुवेतविरुद्ध खेलेकी थिइन् । नेपाली ब्याटरले कुनैपनि खेलाडीले यस प्रतियोगितामा कुल एक सय रन बनाएका छैनन् ।
रुविनाले ४ खेलमा ८७ रन बनाउँदा अन्य ब्याटरले चार खेलमा गरेर अर्धशतक पनि बनाउ सकेका छैनन् । इन्दु बर्मा ४८, विन्दु रावल ३५, काजोल श्रेष्ठ ३२, सीता र अप्सरी बेगमले समान २२ रन बनाएका छन् । उक्त प्रदर्शन एक ब्याटरले पूरा प्रतियोगितामा नभएर एउटा खेलमा बनाउन पर्छ । सामान्य योगफलमा नेपालले युएईलाई रोक्न सक्दैन । विशाल योगफल बनाउन र पूरा गर्न ठूलो इनिङको आवश्यक देखिन्छ ।
टि२० क्रिकेट आक्रामक शैलीको खेल हो । टि२० क्रिकेटमा ३० बल खेलेर १० रन होईन १० बल खेलेर ३० रन बनाउन सक्नुपर्छ । तर नेपाली ब्याटरले भने एक दशक अघिको शैलीमा ब्याटिङ गरेका छन् । अप्सरी बेगम दुई खेलमा १३७ र कविता कुँवर एक इनिङमा १ सय को स्ट्राइक रेटमा ब्याटिङ गरेका छन् ।
अन्य कुनैपनि ब्याटरको स्ट्राइकरेट एकसय छुन सकेको छैन । अन्य सबै ब्याटरको स्ट्राइकरेट टेस्ट शैलीमा छ । नेपालका ब्याटरले प्रतियोगितामा छक्का प्रहार गर्न सकेका छैनन् । नेपालका ८ ब्याटरले कुल २५ मात्र चौका प्रहार गरेका छन् । उता युएईकी ओपनर ओजाले एक्लै २४ चौका र ५ छक्का प्रहार गरेकी छिन् ।
युएईका तीन मध्य दुई ब्याटरको स्ट्राइकरेट १ सय ५० माथि छ । युएईका तीन ब्याटरले ४३ चौका र ६ छक्का प्रहार गरेका छन् । टि२० क्रिकेटनै चौका र छक्काको खेल हो । युएईलाई हराउन नेपाली ब्याटरले सुस्त शैली छाडेर आक्रामक शैलीमा खेल्न आवश्यक छ । टेस्ट होईन आधुनिक शैलीको टि२० क्रिकेट खेल्न आवश्यक देखिन्छ । ९०–१०० रनको योगफलको सोचले नेपाल एसिया कप खेल्न सक्दैन ।
ठूलो योगफल बनाउन सुरुवात राम्रो हुनुपर्छ । राम्रो सुरुवातले मध्यक्रम र तल्लोक्रमका ब्याटरले खुलेर आफ्नो शैलीमा खेल्न सक्छन् । नेपालका ओपनरले राम्रो सुरुवात दिन सकेको खण्डमा मात्र बलियो युएईविरुद्ध राम्रो योगफल बनाउन सक्छ ।
भुटानविरुद्ध १२–३, बहराइनविरुद्ध ५–२, हङकङविरुद्ध १८–१ र कुवेतविरुद्ध १९–१ को सुरुवात गरेको थियो । नेपालका ओपनर र शीर्षक्रमका ब्याटरले राम्रो सुरुवात दिन आवश्यक पर्छ ।
अन्यथा नेपाल १ सय रनको आसपासमै रोकिने सम्भावना देखिन्छ । अर्कोतर्फ टोलीको सोच १ सय रन नभएर १ सय ३० माथिको हुनुपर्छ । ठूलो योगफल बिना युएईलाई हराउन सहज हुने छैन । नेपालको सुरुवातले पनि धेरै निर्भर गर्नेछ ।